थाहा खबर: रामचन्द्र पक्राउप्रति बाबुराम बोले : राजावादीलाई छुट, गणतन्त्रवादीलाई निषेधाज्ञा?
तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न सत्ताधारीहरूकै अवरोधलाई लिएर दालमा कालो देखिएको तर्क गरेका छन्।
'राजावादीहरूलाई देशव्यापी वितण्डाको छुट तर गणतन्त्तवादीलाई निषेधाज्ञा र गिरफ्तार? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको के हो चाला?' उनले भनेका छन्, 'रामचन्द्र पौडेल कै पालामा बनेको पुल उद्घाटन गर्न सत्ताधारीहरूद्वारा किन रोक? दालमा कालो देखियो है!'